သြော် ... Blog လောက နဲ့ Font လောက က သိုင်းလောကထက်ကို ရှုပ်နေပါလား။ ဟားဟား ... Blog လောကမှာဆိုရင် Template လေးတွေရွေးရ၊ Color လေးတွေရွေးရ၊ ပြီးတော့ ဘန်နာလေးတွေလုပ်ရနဲ့ တော်တော်တော့ အလုပ်ရှုပ်တယ်။ ဒီကြားထဲ Cbox တို့ ShoutBox တို့မှာလည်း သွားသွားအော်ရသေးတယ်။ ဟဲဟဲ ... လာသွားတယ်ပေါ့ ... ဘာဖြစ်တယ် .. ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလုပ်တဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော်လည်း ပါတယ်ဗျ။ တရုတ်ကားထဲကလို Blogger ဂိုဏ်းတွေလည်း ဖွဲ့ထားရသေးတယ် ဟားဟား။ ထင်မြင်ချက်အဖြစ်နဲ့ Comment လေးတွေလည်းပေးရသေးတယ် ဟီးဟီး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ ကျွန်တော့် အနေနဲ့တော့ အရမ်းပျော်တယ်။ ရေးရတာကိုရော လျောက်လည်ရတာကိုရော။
Wai Pyo 7:46 pm
ဘာဂိုဏ်းတွေလဲဗျ။ ဟဲ ဟဲ .... ကျနော်ကတော့ကြားနေပဲ။ မြန်မာ ဘလော့ဂ်လောကစမယ်မှမကျန်သေးဘူး။ ဂလိုတွေဖြစ်ကုန်တာ မကောင်းပါဘူး။ ကျနော်လည်း ပျော်ပျော်ပါပဲဗျာ။ comment တွေတော့လိုက်ရေးဖြစ်နေတယ်။
Shinmin 7:50 pm
yeah, that's the whole point of having blog community.Visit your friends whenever u can, just dropaline to say hi at shout box. every little things has it reason, some people just don't get it :)
Nice blog and keep it up cms. btw. black is classic u know :P
CMS 8:08 pm
ကိုဝေဖြိုးရေ .. အဲဒါတော့ အစ်ကိုနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့တူသွားပြီဗျ .. ဟဲဟဲ .. ပျော်ပျော်ပဲနေတာကောင်းပါတယ်ဗျာ။ စိတ်ချမ်းသာတယ်လေ။ ဟုတ်ဘူးလား။
ရှင်မင်းရေ .. အနက်ရောင်နဲ့ ပက်သက်လို့ကတော့ဗျာ ... Blog မှာ အနက်ရောင်ကိုသုံးဖို့ မှတ်ပုံတင်ထားသူ မရှိမချင်း ကျွန်တော်ကတော့ သုံးနေမှာပါ :)
ကျွန်တော်လဲ အနက်ရောင် ဂိုဏ်းသားဘဲ ခင်ဗျ။ စီဘောက်စ်တော့ မသုံးမိဘူး။ အဟဲ။ Gabbly Chat သုံးချင်ရင် ဘယ်မှာ လျှောက်လွှာတင်ရမလဲ ခင်ဗျ။
CMS 10:41 am
GabblyChat သုံးချင်ရင်တော့ Gabbly.com ကိုကြွပါခင်ဗျ ဟဲဟဲ
LIN LET KYAL SIN 4:53 pm
သမီးကတော့ ကောင်းကင်က ကြယ်တွေလတွေ ထွန်းလင်းနေတဲ့ ဂိုဏ်းနော် ဦးလေးချမ်းမြစိုး ဟိဟိဟိ နောက်တာအကို…
အော် နယ်သား ကြီးကြည့်ရတာ "လောက" ခရေဇီ နဲ့တူတယ်...ဘာတွေလည်းမသိဘူး ရှုပ်နေတာပဲ ဘလော့လောက တွေရော၊သိုင်းလောက တွေရော၊ဖောင့်လောက တွေရော...လောကကြီး မှာဒါမျိုးတွေ လည်းရှိသေး သကိုး.. အာစိရေ နော့်
CMS 7:08 pm
နယ်သားလေးရေ အဲဒီလောက်သွားကျတာပေါ့ကွာ ... ဟားဟား ဒါပေမဲ့ တစ်ခုရှိတာက အာစိ ဆိုတာကြီးတော့ မခေါ်ပါနဲ့ကွာ ပြီးတော့လည်း စာလုံးပေါင်းရင်ကြည့်ပေါင်းဦး "အ" ကို ရိုက်ပြီးရင် m ကိုနှိပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော် မဟုတ်ရင် ... မကောင်းဘူး :)
Htoo Myat 4:48 pm
PUNK ဘလော်ဂါ ဂိုဏ်းကို ဘယ်သူဝင်ချင်သလဲဗျ ဟင်...
CMS 4:50 pm
ဟာ . ပြောပါအုံး .. နဲနဲစိတ်ဝင်စားတယ် :)